Ixhuma amplifier emotweni umsakazo sicophamavi - nomsebenzi olula, kuzoba ukwazi ukubhekana ngisho lutho. Into esemqoka - ukuze uthole wonke amathuluzi adingekayo nezingxenye latawudzingeka kudingeka ukufakwa kwalesi simiso, bese izinga umsindo emotweni kakhulu ngcono, noma zizoba neliphelele ngokwengeziwe futhi emsulwa.
Imishini we uhlelo olusha, njengoba umthetho, amplifier uxhumano akhiqizwa womshini, ngakho-self-ukufakwa kudivayisi uvame adingekayo onobuhle ngaphambili oyisibonelo kweminyaka. Kubalulekile ukuphawula ukuthi i-yokukhulisa umsindo zihlukile, futhi ngokukhetha kumadivayisi ezifana esitolo, kuyinto isiqalo ku ukwakheka kanye imodeli of umsakazo ngokwayo. Ngakho, le ndlela uyoba sethubeni nomunye, futhi umphumela uba umsindo ihlanzekile futhi emuhle.
Ngakho, ukuze uxhume amplifier ukuba kwenzeke, uzodinga izinto ezifana phambili, lapho amandla Siyonikwa amandla adaptha ibhethri ukuxhuma idivayisi ngqo emsakazweni, kanye fuses kanye iziqobosho, ngalo inzuzo.
Ungakhohlwa ukuthi amplifier akumelwe nje bagcine ngokufuna nefomethi umsakazo ngokwayo, kodwa futhi ngamandla motor nebhethri. Uma idivayisi yakho yintsha kakhulu, futhi yakhelwe amandla okusezingeni eliphezulu ukusebenza, angeke isebenze elidala imoto hlobo. Ngakolunye uhlangothi, uma amplifier akadingi eziningi amandla, kodwa imoto has a stock enkulu-ke, idivayisi ngeke njalo overheat, okubangela wonke fuses zishe, futhi maduze behluleka.
Ixhuma amplifier sidinga uxhumano owandulelayo fuse. Inani layo kumele kube lithé ukuba likhudlwana kune lamanje izinga eliphelele nobuntu ibhethri. fuse egibele kuyinto igabha ekhethekile, futhi uma ngaphambi le nqubo kutholakala ukuthi e labhidlika enjalo, into kufanele kuthathelwe indawo ngokushesha. Kungenjalo ahlupheke bengayi fuse kuphela amplifier, kodwa futhi umsakazo.
Ukuxhumanisa amplifier imoto has kukhona enifana ngakho inqubo enjalo, okuyinto senziwe abavamile umculo izikhungo. Ukuze imishini yavulwa, kumele kuxhumeke ngekhebuli obukhethekile umthombo umsindo, okusho umsakazo. Umsebenzi onjalo ngeke aphumelele, uma kutholakala nezixhumi ezifanele lapho izintambo kuthiwa esakhiwe. Adaptha ikhebula ixhunywe umugqa ukuphuma, okuyinto has kokubili amplifier futhi umsakazo kakhulu.
Ngemva uxhumano amplifier futhi uxhumo lwayo kwezinye izingxenye auto ephelele, kubalulekile ukuba unamathele sakhe intambo yamandla. Lona nje ngoba isixhumi elikhulu kunawo wonke elitholwa kuye, futhi uzokwazi ukuthola ngisho ingane. I intambo ixhunywe fuse, okuyinto yena, ixhunywe ibhethri, bese kuthathwa ngokuthi endabeni 'isigqoko. " Ithanda emva zonke izinqubo ukuhlola ukusebenza kwe-amplifier futhi ukuhambisana yayo nge umsakazo futhi ngaphambi imoto, przhde ngaphandle imoto endleleni. Uma ukuxhumana amplifier kuhambe kahle, azikho ukwehluleka emsebenzini yayo ngeke.